အောက်မှာပေးထားတဲ့ပုံတွေကိုကြည့်ပါ..ပုံတွေအပေါ်မှာ မေးထားတဲ့စာတွေကို ဖြေပေးပါ။ ဖြေဆိုတဲ့အချိန်မှာ Yes or No ဒါပဲဖြေရမယ့်။ ဖြစ်နိင်ရင်အတတ်နိုင်ဆုံးမြန်မြန်ဖြေပေးပါ။ ကိုယ်မြင်တာ ကိုယ်တွေးတာ ကိုယ့်စိတ်ကို ညာပီးမဖြေရပါ။ ဒီဂိမ်းလေးဟာ တစ်ကယ့်စိတ်ကို ဆုံးဖြတ်ပေးမှာမဟုတ်ပေမယ့် Just for funပါနော်။ Yes or No ဖြေပီးရင် အောက်ဆုံးမှာ သင့်အဖြေပေါ်မူတည်ပြီး သင့်စိတ်ကို အမှတ်ပေးထားပါတယ်.ဟဲဟဲ..
အောက်ကပုံကိုတွေ့လိုက်တာနဲ့ ပထမဆုံးတွေးမိတာ ဒီလူတစ်ခုခုကိုဆုတောင်းနေတာ?
( Yes Or Noမြန်မြန်နော်)
အောက်ကပုံကို တွေ့လိုက်တာနဲ့ရေချိုးပိုက်ခေါင်းလေးက ချစ်စရာကောင်းတယ်လို့ထင်မိလား?
အောက်ကပုံက USB အားသွင်းတာ ?
လှေကားလမ်းရမ်းကြီးလို့လက်ခံတယ်ဟုတ်?(Not for Beginner)
ကျိုးပဲ့နေတဲ့I Phone ?
၆ခု ဒါမှမဟုတ် ၆ခုထက်ပိုပြီး Yesဆိုတာ လက်ခံခဲ့ရင် သင့်စိတ်က Clear ဖြစ်တယ် ခပ်ရိုးရိုးသမားလို့ဆိုရမှာပါ..
၆ခု ဒါမှမဟုတ် ၆ခုထက်ပိုပြီး yesလည်းမဖြေNoလည်းမဖြေပဲတယောက်တည်း အမြင်တွေစူးရှပီး တခွီးခွီးနဲ့သဘောတွေကျနေရင်တော့ မိတ်ဆွေ သင်မရိုးတော့ဘူးနော်….All Just For Fun…Mind Test လေးကိုchallengeလုပ်နိုင်ပါတယ်..
Heavy Metal ဂီတက ၁၉၆၀ နှောင်းပိုင်းနဲ့ ၁၉၇၀ ခုနှစ် အစောပိုင်းမှာ တီထွင်ခဲ့တဲ့ ရော့ခ်ဂီတ အမျိုးအစားတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ Alice Cooper ကတော့ ဟဲဗီးမက်တယ်အတွက် ပထမဆုံး စစ်မှန်တဲ့ ရှေ့ပြေးပုံစံကို စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့...
ခွေးတွေဟာ သူ့ရဲ့သဘာဝအရ သစ္စာရှိတာကြောင့် ကမ္ဘာပေါ်မှာ အကောင်းဆုံးနဲ့ ရေပန်းအစားဆုံး အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်အဖြစ် သတ်မှတ်ခံထားရတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် လူတိုင်းက သစ္စာရှိတဲ့ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်ကို အကြောင်းပြချက်များစွာနဲ့ အိမ်မှာထားဖို့ နှစ်သက်ကြပါတယ်။ ါကြောင့် သင်ဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အကျော်ကြားဆုံး...
Vday နေ့ရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ ချစ်သူတွေအချင်းချင်း လက်ဆောင်တွေဖလှယ်တာ အပြင် ချစ်ခြင်းတွေဖလှယ်တာကြတာက ပုံမှန် ကိစ္စတစ်ခုပါပဲ။ လူတစ်ချို့ကတော့ ချစ်သူများနေ့မှာ ပန်းစည်းတွေ suprise တွေလိုချင်တာမဟုတ်ပဲ နှစ်ယောက်ထဲ အမှတ်တရတစ်ချို့ကို ဖန်တီးချင်ကြပါတယ်။ အကောင်းစား ပိုက်ဆံအိတ်တွေနဲ့ အကောင်းစား cosmetic...
ဇာတ်လမ်းကောင်းကောင်းလေးလည်း ကြည့်ချင်ပေမယ့် ကိုယ့်ရဲ့အချိန်ကုန်ရတာနဲ့ မထိုက်တန်တဲ့ ဇာတ်လမ်းမျိုးတွေနဲ့ တွေ့မှာကြောက်နေတဲ့ မိတ်ဆွေတို့အတွက် ဇာတ်လမ်းကောင်းလေးတွေ ရွေးချယ်ပေးပါရစေ။ ဇာတ်လမ်းတွေက သင်ကြည့်ဖူးပြီးသားတွေဖြစ်နေမလား မသိပေမယ့် ကြည့်ပြီးရင်တောင် ပြန်ကြည့်သင့်တဲ့ ဇာတ်လမ်းအမျိုးအစားတွေကို ရွေးချယ်ပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဖြစ်ရပ်မှန်တွေကို အခြေခံထားပြီး စွဲမက်ဖို့ကောင်းသော အမြင်အာရုံတွေနဲ့...